Al Shabaab oo sii Daysay Shaqaalihii Markab Dhawaan Kusoo Caariyay Xeebta Shabeelaha Dhexe.
Saturday July 19, 2014 - 14:23:04 in Wararka by Super Admin
Wilaayada islaamiga shabeelaha dhexe ayaa sii daysay shaqaalaha markab isbuucii lasoo dhaafay ku caariyay xeebta shabeelaha dhexe.
Munaasabad ka dhacday shabeelaha dhexe ayaa lagusii daayay shaqaalaha markabka oo ka koobnaa 10 qof oo dhammaantood ahaa muslimiin.
Kabtanka Markabka iyo shaqaalaha kale ayaa wajigooda farxad laga dareemayay waxayna xarakada Shabaabul Mujaahidiin uga mahad celiyeen sida ay ugusoo gurmadeen.
Shaqaalaha Markabka ee lasii daayay ayaa ka kooban 10 qof oo ukala dhashay wadamada Tanzania iyo Kenya waxayna hadda ku suganyihiin magaalada Muqdisho.
ilo wareedyo lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in Markabka kusoo caariyay deegaanka Meyraaley oo u dhaxeeya degmooyinka Warsheekh iyo Raaga Ceelle ay dhawaan bililiqo ugeysteen maleeshiyaad katirsan Dowladda Federaalka balse markii dambe ayay halkaasi ku baxeen ciidamo katirsan maamulka islaamiga shabeelaha dhexe.
Abuubakar Xaaji Shariif waa Kabtanka Markabka wuxuuna kasoo jeedaa magaalada Mumbaasa ee wadanka Kenya isaga iyo saaxibadii ayaa soo dhaweeyay sida wanaagsan ee loola tacaamulay wuxuuna sheegay in uu dadaal ku bixinayo sidii uu markabka ciladoobay uga jiidan lahaa xeebaha Soomaaliya.
Sarkaal katirsan Shabaabul Mujaahidin ayaa SomaliMeMo u sheegay in dhankooda ay wanaajiyeen shaqaalaha Markabka oo ahaa dad muslimiin musaafur ah islamarkaana ay ka badbaadiyeen dad dhibaata ugeysan lahaa,Al Shabaab ayaa caan ku ah ugargaaridda dadka muslimiinta ah.
10,July,2014 ayay aheyd markii Markabkan Kenya laga leeyahay kusoo caariyay xeebta shabeelaha dhexe kadib markii cilad ay kasoo gaartay dhanka Matoorka isagoo marayay badweynta Hindiya.
Arrintani waxay fadeexad ku tahay Hoggaanka DF-ka oo isbuucii lasoo dhaafay war been ah ka sheegay warbaahinta iyagoo si cad u sheegay in ay soo badbaadiyeen shaqaalaha Markabka arrinkaasi oo been cad ahaa taasi bedelkeedna ciidanka Dowladda ayaa bililiqo kula dhaqaaqay hantidii markabka dul saarneed.